Antares' gold reserves in Zimbabwe climb. (Antares Mining and Exploration Corp.) (Brief Article) - Version details - Trove
1994-07-15, English, Article, Journal or magazine article edition: Antares' gold reserves in Zimbabwe climb. (Antares Mining and Exploration Corp.) (Brief Article)
Euromoney Trading Limited, 1994 July 15
Antares' gold reserves in Zimbabwe climb. (Antares Mining and Exploration Corp.) (Brief Article)
Antares' gold reserves in Zimbabwe climb.
American Metal Market, v102, no.n135, 1994 July 15, p7(1) (ISSN: 0002-9998)
Gold Ores (Product code)
Antares Mining and Exploration Corp. (Company name)
TORONTO -- Antares Mining &​ Exploration Corp. said reserves at its Lady Lina gold property in Zimbabwe have risen sharply since January as a result of exploration and an accelerated underground ...
Some editions of the publication "American metal market (New York, N.Y. : 1926)" are available from these libraries. The edition containing this article ( v102, n135, 1994 July 15, p7(1) ) may not be available: